Dooda Jimcaha - BBC Somali - Aqoon Guud
U gudub qaybta sahminta goobta
Shuruudda wax raadinta:
Boggan waa la kaydiyay, waxba laguma qoro. Faahfaahin ku saabsan kaydinta boggan (English).
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Maarso, 2013, 15:32 GMT 18:32 SGA
Todobaadkan waxaa lagu falanqeynayaa barnaamishka arimaha ammaanka Soomaaliya iyo caqabadaha ku hor gudban.
Waxaad u baahan tahay Flash player sax ah si aad u daarto Maqal ama Muuqaal.
Soo daji qaabkii ugu dambeeyay ee Flash Player
Qalab kale ku ciyaar
Todobaadkan waxaa lagu falanqeynayaa barnaamishka arrimaha ammaanka Soomaaliya iyo caqabadaha ku hor gudban. Sidee amniga wax looga qaban karaa iyo saameynta uu ku yeelan karo amniga gobollada hadii ay ka baxaan ciidamada Itoobiya sidii dhacday todobaadkii hore oo ay ka baxeen magaalada Xudur.
Soomaaliya waxa ay hadda leedahay dowlad aan KMG aheyn oo shaqeyneysa caalamkuna ictiraafsan yahay, waddanka waxaa ka howlgala oo dowladda ka saacida amniga ciidamo shisheeye, dowladda hadda jirta waxa ay sheegtay lix tiir oo aasaas u ah hanaanka dowladnimo in ay ku shaqeynayaan. Waxaa ugu horeeya lixda tiir amniga hadana sidaas oo ay tahay waxaa weli sii socda qaraxyadii.
Waxa ka qeyb galay doodda, wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhiga Cabdiraxmaan Dheere, wasiir ku xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdishakuur Cali Mire,
Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ah mudane ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow oo isaguna ah xildhibaan ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka.
General Maxamed Nuur Galaal, oo ah khabiir meleteri kana mid ahaa hogaamiyayaashii ciidamada Soomaaliya. Siyaasiga Cali Cabdi Giir oo ahaan jiray wasiir hore, xildhibaanna ka ahaa baarlamaankii kan ka horeeyay.
Dunida iyo MaantaCTA60:00
Caawa iyo CaalamkaCTA30:00
Ganacsiga Soomaalida ee xudduuda Kenya iyo Uganda 04:16
Somaliland oo mushaar siinaysa ciidankii naafoobay 03:07
Sheekh Umal oo ka hadlay buug ku saabsan riddada 04:00
Cabdi Qaybdiid oo ka cabanaya Puntland 03:50
Albayrak oo maamulaysa dekadda Muqdisho 02:40
Harraad iyo hoy la'aan kaddib weerarkii Westgate 03:44
Soomaalida Leicester oo horumar lagu ammaanay 04:44
Qurbe joogta dhaqankooda "ma garanayaan" 03:41
faahfaahinta Khilaafka badda Soomaaliya 04:45
Soomaali ku biireysa Daacish 03:53
Wareysi r'iisul wasaare Cabduwelii 04:32
Wareysi R'iisul wasaare Cabduweli 05:30
Sharaxaad ku saabsan dhacdadii Westgate. 01:05
60 Ilbiriqsi: Oscar Pistorius 01:05
60 Ilbiriqsi: Oscar Pistorius 01:06
Video 15 ilbiriqsi: AMISOM oo 'kufsi ku kacday' 00:14
Wax ay tahay kooxda al-Shabaab 01:06
Musuq oo dalalka Africa lacag badan uga lunto 00:14
Waraysi Mudane Yuusuf Xasan 03:55
Sawirro: Aftida loo qaaday madaxbanaanida Scotland (none)
Sawirro: Rabshadaha Maraykanka (none)
Sawirro: Hindiya oo hawada sare laga sawiray (none)
Sawirro: Duqeyntii ugu darnayd ee Isra'iil u gaysatay Qaza (none)
Sawirro: Ciidda magaalada Garissa (none)
Sawirro: Diyaaradda Malaysia ee Ukraine ku burburtay (none)
Sawirro dhamaadka Koobka Adduunka (none)
Sawirro: Duqeymaha Isra'iil ee Qaza (none)
Sawirro burburinta mowlacyada Ciraaq (none)
Sawirro weerarka Kenya (none)
Noo soo dir sawiradaada
Website-yo Xiriir la leh
Isku xirayaasha BBC
BBC © 2014 BBC mas'uul kama aha waxa ku qoran boggaga aan BBC ahayn.
Boggan waxaa sida ugu wanaagsan loogu daalacan karaa qaab waqtiga la socda iyadoo la adeegsanayo waraaqaha qaabaysan ee (CSS). Adigoo awoodi doona in aadqaabka aad hadda isticmaalayso ku aragto bogga waxa ku qoran, hadana si buuxda ma kuugu muuqan doono. fadlan ka fakar in aad badasho barnaamijkaaga wax baaridda (browser) ama in aad kordhiso awoodda waraaqaha qaabaynta ee (CSS) hadii aad sidaa yeeli karto.